China Sensor Intelligent လမ်းမီး China Manufacturers & Suppliers & Factory
နယူးကုန်ပစ္စည်းများ Lighting စီးရီး
ရှုခင်း Lighting စီးရီး
အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး
ထုတ်ကုန်:41% - 50%
နယူးကုန်ပစ္စည်းများ Lighting စီးရီး >
လူမီနီယမ်အလွိုင်း Lighting ဝင်ရိုးစွန်း Spinning
LED ကို Module
အမြင့်ပါဝါနဲ့ LED လမ်းမီး
ပေါင်းလိုက်သော Lamps စီးရီး
high-ရွက်တိုင် Lamps စီးရီး
ရှုခင်း Lighting စီးရီး >
အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး >
LED Project မှမီးအိမ်
LED Tile slot မီးအိမ်
LED ကို Guardrail အလင်း
traffic ပစ္စည်းစီးရီး >
နယူးကုန်ပစ္စည်းများ Lighting စီးရီး
ရှုခင်း Lighting စီးရီး
အဆောက်အဦး Lighting စီးရီး
Sensor Intelligent လမ်းမီး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Sensor Intelligent လမ်းမီး ထုတ်ကုန်များ)
multi-functional ဖြစ်စေ Intelligent လမ်းမီး
min ။ အမိန့်: 10 Bag/Bags
လမ်းပေါ်မှာဆီမီးခွက်စီမံခန့်ခွဲမှုပုဂ္ဂိုလ်များကိုပိုမိုပေးဘို့သာမန်လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်အသိဉာဏ်အလင်းရောင်သည်အလွန်ဝမ်းစွမ်းအင်ချွေတာရေးနှုန်းတိုးမြှင့်ကိုထိရောက်စွာ, မီးခွက်၏တန်ခိုးစားသုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်, အသိဉာဏ်လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်, ပြည့်စုံခြင်းနှင့်လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်အသိဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့...
ဆိုလာပြားတပ်ဆင်ခြင်းအတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သည်ပါးလွှာသောနေရောင်ခြည်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်၊ သို့သော်ခြားနားချက်အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော lgiht တွင် CIGS ဆိုလာပြားများဟုခေါ်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသောဆိုလာပြားများရှိသည်။ IGS Flexible PV module တစ်ခုဖြစ်ပြီးစျေးကွက်တွင်အကျဆုံးသောပါးလွှာသော...
min ။ အမိန့်: 10 Set/Sets
CHENG XU electrics group Co. , Ltd ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ရှန်ဟိုင်းနှင့်အလွန်နီးကပ်သော Jiangsu ပြည်နယ်၊ Yangzhou City တွင်တည်ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ပအလင်းရောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အထူးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကထုတ်ကုန်များတွင်လမ်းမီး၊ ယာဉ်အသွားအလာအချက်ပြမီးများ၊ ဥမင်အလင်း၊...
light LED ၏အကြီးမားဆုံးသောလက္ခဏာမှာ directional transmitting light ၏လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ power LED အားလုံးနီးပါးသည် riflors များတပ်ဆင်ထားကြပြီးထိုကဲ့သို့သော reflector များ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည် lamp များထက်မြင့်သည်။ ထို့အပြင် LED Reflector ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို Photoeffect detection တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ LED...
ဤလမ်းမီးလုံးကိုလမ်းနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတွင်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်လမ်းမီးခွက်များရှိသဖြင့်ကိုက်ညီသောမီးချောင်းများနှင့်မတူပါ။ ဤကဲ့သို့သော lamp lamp ၏ဒီဇိုင်းသည်အထူးကောင်းမွန်သည်၊ lamp တိုင်ကိုအလူမီနီယံပရိုဖိုင်းဖြင့်အသုံးပြုသည်။...
မြို့လမ်းမီးအတွက်အသုံးပြုသောလမ်းမီးများအလင်းရောင်အရင်းအမြစ်သည်များသောအားဖြင့် LED (သို့) ဆိုဒီယမ်မီးခွက်ဖြစ်ပြီးအသွင်အပြင်သည်အလွန်လှပသည်။ ဝယ်သူနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဒီဇိုင်းသဘောတရားအရဖြစ်သည်။ နေ့ခင်းဘက်၌အနုပညာဆန်သောလမ်းမီးများကမတူကွဲပြားသောယဉ်ကျေးမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။...
ကျေးလက်လမ်းပိုမိုကောင်းမွန်သောပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖန်တီးရန်၊ ပြည်သူနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရသောလူနေမှုအခြေအနေများကိုပံ့ပိုးရန်ခေတ်မီစေရန်ကျေးလက်လမ်းမီးခွက်များကိုတိုင်းပြည်လမ်း၊ အထူးသဖြင့်လမ်းမီးခွက်များနှင့်မီးအိမ်များတပ်ဆင်ခြင်း၊ မြို့ပြစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရကျေးလက်လမ်းမီးတိုင်များအကြားအာကာသအကျယ်အ ၀...
လမ်းမီးတွင်အလင်းပိတ်ခြင်းအတွက်ကိရိယာကိုထိန်းချုပ်ရန်အဝေးထိန်းကြိုးမဲ့ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ The Times ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူမြို့၏ခေတ်မီတိုးတက်မှု၊ မြို့လမ်းမီးနှင့် ၀...
အဆိုပါဘက်ပေါင်းစုံနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းပေါ်အလင်းနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်အားဖြင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲထို့နောက်ဘက်ပေါင်းစုံနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးလမ်းပေါ်အလင်း၌လီသီယမ်ဘက်ထရီမှတရားစွဲဆိုထားသည်။ တစ်နေ့တာအတွင်းပင်တစ်မိုးအုံ့နေ့၌, ဒီနေရောင်ခြည်သုံးမီးစက် (နေရောင်ခြည် panel က)...
လမ်းမကြီးအလင်းရောင်လမ်းမီးခွက်များစွာကိုမျိုး, ဒါပေါ်မှာ Single-လက်မောင်းလမ်းမီးခွက်, ကို double-လက်မောင်းလမ်းမီးခွက်, Self-ကွေးသောလက်ရုံးတော်လမ်းမီးခွက်နှင့်သို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ဒါကလမ်းပေါ်ကဆီမီးခွက်ခေတ်မီခြင်းနှင့်ရိုးရာရိုးရှင်းတစ်ခုတည်းလက်မောင်းလမ်းမီးခွက်ဖြစ်၏။ လမ်းအပိုင်း, အကျယ်,...
classical Single-Arm လမ်းမီး
ဒီထုတ်ကုန်လှပသောဒီဂရီ, အသွင်အပြင်ကနေသို့မဟုတ်အလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရဲ့အစိမ်းရောင်စွမ်းအင်ချွေတာရေး မှစ. , အသုံးပြုသူရဲ့မေတ္တာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုရှိမရှိ, တစ်ခုတည်းလက်မောင်းလမ်းဆီမီးခွက်ကို အသုံးပြု. အလွန်ကောင်းသောအဆင်ပြေစေရန်, အလေးချိန်၎င်း၏အလင်း, အဆင်ပြေကြလိမ့်မည်နှင့်ပိုပြီး compression...
နယူးနဲ့ LED လမ်းမီး Holder
လမ်းမီးခွက်သည်ဦးခေါင်း၏ဤကြင်နာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သော LED ကိုလမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းက၎င်း၏အလားတူထုတ်ကုန်ထံမှကွဲပြားခြားနားသည်။ လမ်းအလင်းရောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လမ်းမီးခွက်၏အရည်အသွေးနှင့်အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းမရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြသည်။...
graphene ကို LED လမ်းမီး
graphene, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ optical, လျှပ်စစ်, စက်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိပါတယ်ပစ္စည်းသိပ္ပံ, Micro-nano အပြောင်းအလဲနဲ့, စွမ်းအင်, ဇီဝဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဖြန့်ဝေအရေးကြီးသောလျှောက်လွှာအလားအလာရှိပါတယ်, အနာဂတ်တော်လှန်ရေးသမားပစ္စည်း graphene တစ်အတော်လေးကျယ်ပြန့်လှိုင်းအလျားအတွက်အလွန်ကောင်းသော optical...
Intelligent လမ်းဆီမီး modular ဒီဇိုင်း
တရုတ်မြို့နှင့်စီးပွားရေးလျင်မြန်စွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းနှင့်အတူ, traffic ကိုလုံခြုံမှုနှင့်အလင်းရောင်၏မြို့ပြအလင်းရောင် beautification အင်ဂျင်နီယာကြီးကြပ်မှုမီး, စီးပွားရေးနှင့်လူမှုရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီနိုင်ရန်အတွက်တစ်ချိန်တည်းမှာ, လမ်းမီးခွက်များအတွက်ဝယ်လိုအား ပို. ပို....
အဆောက်အဦးအပြင် Intelligent လမ်းမီး
လမ်းမီးခွက်သည်အသိဉာဏ်ကိုထိန်းချုပ်အမျိုးအစားလမ်းအလင်းရောင်များအတွက်လျှင်မြန်စွာနှင့်တိကျစွာ, အော်တိုထောက်လှမ်းနည်းပညာ၏ရေးစပ်ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ရေး, ကွန်ပျူတာကွန်ယက်ကိုနည်းပညာ, အလိုအလျှောက်ထိန်းချုပ်သည့်နည်းပညာသစ်များအာရုံခံနည်းပညာအဆင့်မြင့်နည်းလမ်းများသုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်,...
LED High Quality လမ်းမီး
တတိယမျိုးဆက်အလင်းရောင်အရင်းအမြစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သောအမြင့်ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခှကျ, သာ 1960 ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ကြောင့်မြင့်မားတဲ့ဖိအားဆိုဒီယမ်မီးခှကျကိုအမြင့်ဆုံးတောက်ပထိရောက်မှု, ရှည်သောအသက်, လက်ခံနိုင်ဖွယ်နှင့်မထောင်ချောက်အရောင်, အနွမ်းဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေရန်လွယ်ကူမဟုတ်,...
အနီရောင်တရုတ်နိုင်ငံတွင်မင်္ဂလာကိုကိုယ်စားပြုသည်ဤအနည်းငယ်လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်ဒီဇိုင်းကိုတရုတ်လေတိုက်ဆီသို့ဦးတည် biased ဖြစ်ပါတယ်, ပူသို့ကျဆင်းလာနှင့်အတူလှံတံကိုယျခန်ဓာကို electrostatic pensu အပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး,...
လမ်းမီးခွက်သည်ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အမျိုးမျိုး, တရုတ်လေတိုက်ဖြစ်နိုငျသညျ, ဥရောပဂန္ဖြစ်ပါသည်, စတဲ့ကွဲပြားခြားနားသောလေထုကိုထည့်သွင်းဖို့ restore ပြန်ရှေးခေတ်နည်းလမ်းများ, တစ်ဘက်ရေနှင့်မြေဆီလွှာများအတွက်စတိုင်အသီးအသီးမျိုးကိုတစ်ဒေသဖြစ်နိုင်ပါတယ်။...
က The Times သတင်းစာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, မြို့ခေတ်မီ၏တိုးတက်မှု, မြို့လမ်းအလင်းရောင်များအတွက်ဝယ်လိုအားနှင့်မြို့-အလင်းရောင်စီမံကိန်းကိုပိုမိုကြီးမားသည်, စွမ်းအင်ထောက်ပံ့ရေးနှင့်ဝယ်လိုအားအကြားဆန့်ကျင်, စွမ်းအင်ချွေတာရေးများ၏လိုအပ်ချက်ပိုမိုထင်ရှားတဲ့ဖြစ်လာဒီဇိုင်း အစိမ်းရောင်အလင်းရောင် ပို. ပို. အရေးတကြီး,...
အချိုးမညီသည့် LED လမ်းမီး
ဤအလမ်းမီးခွက်၏အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်းရိုးရာလမ်းမီးခွက်၏လျော့ပါးသွားမည်ဖြစ်သလိုဒီဇိုင်းပုံစံကနေကွဲပြားခြားနားသည်။ ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, ထိုအလင်းတိုင်ခန္ဓာကိုယ်ဒီဇိုင်းကိုရဲရင့်ဖြစ်ပါတယ်ထံမှမြင်နိုင်ပါသည်, ဤအနည်းငယ်လမ်းပေါ်ဆီမီးခွက်အမြင့်အနိမ့်သောလက်ရုံးတော်၏ပုံစံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်မှတပါး, လမ်းမီးခှကျ,...
LED လမ်းမီးခွက်၏လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာနေသော်လည်း LED လမ်းမီးခွက်၏စံချိန်စံညွှန်းထက်နောက်ကျ။ ကမ္ဘာတဝှမ်း, ထိုကဲ့သို့သောဥရောပမှာသူများအဖြစ် LED streetlamps, မစံချိန်စံညွှန်းများရှိနေကြသည်မဟုတ်။ အညွှန်းပေါ်တွင်အတူတူမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့, LED လမ်းပေါ်ဆီမီးဒေသဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ,...
LED module တွေယခုအပ်-shaped ဓါတ်ရောင်ခြည်, အပူလွန်ကျူး၏ 360 ဒီဂရီ, အသေးစားလေတိုက်ခုခံအသုံးပြုနိုင်သည်လို့ပဲ။ မြင့်မားအအေးထိရောက်မှုသည်, LED မီးချစ်ပ်သောဘဝ 50000 နာရီသေချာစေရန်ကပို, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့လမ်းအလင်းရောင်အတွက်အသုံးပြုတဲ့ module တစ်ခု၏အားသာချက်သည်အတိုင်း, ကပုံရသည်သစ်ကို LED မော်ကျူးဆီမီးခွက်ဥပမာ,...
LED ကို Module လမ်းမီး
ဘက်စုံသုံး၏ modular နှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်အခြေခံပြီးမီးခွက်နှင့်မီးအိမ် LED, အပိုင်းပိုင်းသို့မှို၏မြင့်ကုန်ကျစရိတ်မှအစအဦးအနေဖြင့်အစဉ်အလာလမ်းမီးခှကျကိုပြောင်းလဲအများအပြားယူနစ် module တစ်ခုမှတဆင့်တစ်ဦးဆဋ္ဌဂံသို့မဟုတ်မြို့ပတ်ရထားဆီမီးခွက်ဖွဲ့စည်းရန်နှင့်တစ်ခုတည်း module...
LED Intelligent လမ်းမီးစီးရီး
cylindrical Intelligent လမ်းမီး
အသိဉာဏ်အလိုအလျောက်အလင်းမှိန်ခြင်းစနစ်ကို LED Module
ဘက်ပေါင်းစုံ LED ကိုနေရောင်ခြည်လမ်းမကြီးအလင်းများ
high-ပါဝါ LED Project မှမီးအိမ်
Conical လူမီနီယမ်အလွိုင်း Lighting ဝင်ရိုးစွန်း Spinning
LED ကိုလမ်းမီး Dream
LED Landscape လင်ဟင်မီးအိမ်
180W LED ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းမီးအိမ်
Sensor Intelligent လမ်းမီး sensor Intelligent လမ်းမီး LED Intelligent လမ်းမီး high-tech Intelligent လမ်းမီး နယူး Intelligent လမ်းမီး LED Intelligent လမ်းမီးစီးရီး Led လမ်းမီး cylindrical လမ်းမီး
Sensor Intelligent လမ်းမီး sensor Intelligent လမ်းမီး LED Intelligent လမ်းမီး high-tech Intelligent လမ်းမီး နယူး Intelligent လမ်းမီး
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Jiangsu chengxu Electric Group Co., Ltd All rights reserved ။